Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - 5.3.4 Famaranana
Ny antso an-kalamanjana dia mamela anao hahita vahaolana amin'ireo olana izay azonao ambara mazava fa tsy afaka mamaha ny tenanao.
Rehetra misokatra antso tetikasa telo-Netflix Loka, Foldit, ataon'ny mpiara-to-patanty-mpikaroka nametraka fanontaniana ny endrika manokana, mangataka vahaolana, ary avy eo dia naka ny tsara indrindra vahaolana. Ny mpikaroka dia tsy mila mahafantatra ny tsara indrindra ny manontany manam-pahaizana, ary indraindray ny hevitra tsara avy amin'ny toerana tsy ampoizina.
Amin'izao fotoana izao dia afaka manasongadina ny fahasamihafana roa lehibe eo amin'ny tetikasa antso an-tariby sy ny tetikasa fananganana olombelona Voalohany, amin'ny tetikasa antso an-tariby, ny mpikaroka dia mamaritra tanjona iray (ohatra, manambara ny sarimihetsika sarimihetsika), fa amin'ny fanatanterahana ny olombelona, ​​ny mpikaroka dia mamaritra ny mikrotaskana (ohatra, mametraka ny vahindanitra). Faharoa, amin'ny antso an-kalalahana, ireo mpikaroka dia maniry ny fandraisan'anjara tsara indrindra - toy ny algorithm tsara indrindra amin'ny famaritana ny sarimihetsika sarimihetsika, ny rafitra ambany indrindra amin'ny proteinina, na ny ampahany manan-danja indrindra teo amin'ny zavakanto teo aloha - fa tsy karazana fitambarana tsotra fotsiny ireo fanomezana.
Raha nomena ny modely ankapobeny ho an'ny antso misokatra sy ireo ohatra telo ireo, inona ireo olana atrehan'ny fikarohana ara-tsosialy mety ho an'ity fomba fiasa ity? Amin'ity fotoana ity, tokony hanaiky aho fa mbola tsy nisy ohatra mahomby maromaro (noho ny antony hanazavako amin'ny fotoana iray). Raha resaka analoga mivantana, dia azonao sary an-tsaina ny antso an-tariby Peer-to-Patent izay ampiasain'ny mpikaroka iray ara-tantara mikaroka ny antontan-taratasy voalohan-teny mba hiresahana olona na hevitra manokana. Ny antso an-dàlana misokatra ho an'ity karazana olana ity dia mety ho sarobidy indrindra raha tsy ao anaty tahirin-tsoratra tokana ny tahirin-kevitra mety mety, fa kosa zaraina maimaim-poana.
Amin'ny ankapobeny, maro ireo governemanta sy orinasa manana olana mety ho azo atao hanokatra antso satria ny antso an-telefaona dia afaka mamorona algorithmes izay azo ampiasaina ho an'ny faminaniana, ary ireo faminaniana ireo dia mety ho mpitari-dalana lehibe ho an'ny hetsika (Provost and Fawcett 2013; Kleinberg et al. 2015) . Ohatra, toa i Netflix maniry ny haminany ny sarimihetsika momba ny sarimihetsika, ny governemanta dia mety maniry ny haminavina ny vokatra tahaka ny hoe trano fisakafoanana no mety ho fanitsakitsahana ny fahasalamana ara-pahasalamana mba hanomezana lanja kokoa ny loharanom-panaraha-maso. Nalain'ny Edward Glaeser sy ireo mpiara-miasa (2016) an'io olana io ny famoahana an-tsokosoko mba hanampiana ny tanànan'i Boston haminavina ny fanaraha-maso fahadiovan'ny hotely sy ny fanitsakitsahana ny fikarakarana ara-pahasalamana mifototra amin'ny angona avy amin'ny fanadihadiana Yelp sy ny angona fanadihadiana ara-tantara. Noheverin'izy ireo fa ny modely manara-penitra izay nahazo ny antso an-kalalahana dia hanatsara ny vokatra ateraky ny mpanamory trano fisakafoanana eo amin'ny 50%.
Ireo antso open-ko dia azo ampiasaina ihany koa mba hampitahana sy hizaha ny teoria. Ohatra, ny fianarana fianakaviana mahavariana sy fanabeazana zaza tsy ampy taona dia nanara-maso ny zaza 5.000 hatramin'ny nateraky ny tanàna amerikana 10 samihafa (Reichman et al. 2001) . Ny mpikaroka dia nanangona tahirin-kevitra momba ireo ankizy ireo, ny fianakaviany, ary ny tontolo iainany any am-piterahana sy eo amin'ny 1, 3, 5, 9 ary 15 taona. Raha nomena ny fampahalalana rehetra momba ireo ankizy ireo, ahoana no ahafahan'ny mpikaroka maminavina ny vokatra toy ny hoe iza no ho afaka amin'ny fianarana ambony? Na, azo lazaina amin'ny fomba mahaliana kokoa ho an'ny mpikaroka sasany, inona ny angona sy ny teoria izay mety hahomby indrindra amin'ny faminaniany ireo vokatra ireo? Satria tsy misy na iza na iza amin'ireo ankizy ireo amin'izao fotoana izao efa ampy taona mba hianatra any amin'ny oniversite, izany dia mety ho marina mialoha ny filazana, ary misy fomba maro izay mety hampiasain'ny mpikaroka. Ny mpikaroka iray izay mino fa ny tanàn-dehibe dia manan-danja amin'ny famolavolana ny vokatra eo amin'ny fiainana dia mety haka fomba iray, raha ny mpikaroka iray mifantoka amin'ny fianakaviana dia mety hanao zavatra hafa tanteraka. Iza amin'ireto fomba fiasa ireto no ho tsara kokoa? Tsy fantatsika, ary mandritra ny dingana hahitana izany, dia afaka mianatra zavatra manan-danja isika mikasika ny fianakaviana, ny manodidina, ny fanabeazana ary ny tsy fitoviana ara-tsosialy. Ankoatr'izay, ireo faminaniana ireo dia mety ampiasaina mba hitarihana ny fanangonana tahiry ho avy. Alaivo sary an-tsaina hoe nisy mpianatra vitsy an'isa nahazo diplaoma tany amin'ny oniversite izay tsy nambara fa nahazo diplaoma tamin'ny iray amin'ireo modely; Ireo olona ireo dia ho kandidà tena tsara ho an'ny fanadihadiana kalitao manaraka sy ny fijery ara-jeografika. Noho izany, amin'ity karazana antso misokatra ity dia tsy ny fiafaràn'ny faminaniana; Aleo izy ireo manome fomba vaovao hampitahana, hanatsarana, ary hampifangaro ny fomba amam-panao teorika. Ity karazana antso misokatra ity dia tsy voafaritra manokana amin'ny fampiasana ny angona avy amin'ny fianarana mahatsikaiky momba ny fianakaviana sy ny zaza salama mba haminaniany hoe iza no handeha any amin'ny oniversite; Azo ampiasaina izy io mba haminavinana ny vokatra izay horaisina any amin'ny toeram-piasana ara-tsosialy lavitrisa.
Araka ny nosoratako tany aloha tany amin'ity fizarana ity, dia tsy nisy ohatra maromaro tamin'ireo mpikaroka ara-tsosialy nampiasa antso an-telefaona. Heveriko fa izany dia noho ny antso an-telefaona tsy mifanaraka amin'ny fomba iankinan'ny mpahay siansa sosialy amin'ny fanontaniany. Miverina amin'ny loka Netflix ny mpahay siansa sosialy raha tsy manontany ny momba ny tsirony; Aleo izy ireo hanontany hoe ahoana sy nahoana ny fahasamihafan'ny kolontsaina dia samy hafa amin'ny olona avy amin'ny sokajy samihafa samihafa (jereo ohatra ny Bourdieu (1987) ). Ny "fomba ahoana" sy ny "antony" dia tsy mitarika vahaolana mora azo azo saintsainina, noho izany dia toa tsy dia mety loatra ny manokatra antso. Araka izany dia hita fa ny antso an-kalalahana dia mety kokoa amin'ny faminavina fanontaniana noho ny fanontaniana momba ny fanazavana . Ny mpahay siansa vao haingana anefa dia niantso ireo mpahay siansa sosialy mba handinika ny dichotomy eo amin'ny fanazavana sy ny faminaniana (Watts 2014) . Amin'ny maha-tsipika ny faminaniana sy ny fanazavàna, dia manantena aho fa ny fandefasana mivelatra no ho lasa mahazatra kokoa amin'ny fikarohana ara-tsosialy.